[Wednesday, June 7th, 17] :: Ololaha Talaalka Cudurka Jadeecada Oo Ka Furmey Guud Ahaan DDSI
Jig-jiga(RH)Waxaa Guud ahaanba Deegaanka Soomaalida itoobiya gaar ahaan magaalooyinka qabridahar iyo dhagaxbuur ka bilowday ololihii talaalka cudurka jadeecada iyo daawaynta cudarada isku dhafka ah oo laga talaalayo caruurta da'doodu udhaxaysa 6 bilood ilaa 15 sano. Hadaba agaasinka ka hortaga cudurada faafa iyo kor uqaadida hawlaha caafimaadka ee xafiiska caafimaadka DDSI mudane Caydaruus Axmed oo ka hadlay ololahan ka bilowday magaalada dhagaxbuur ayaa sheegay inuu ololahani yahay mid ka hortag ah islamarkaana hadii aan laga dawaynin caruurta ay da'doodu udhaxayso 6 bilood ilaa 15 sano uu keeni karo xanuunada sida nafaqa darada indhaxanuunka iyo xanuuno kale. Sidoo kale waxaa iyana ka hadlay qaarkamid ah mas'uuliyiinta gobolka jarar iyo mas'uuliyiinta mm dhagaxbuur oo sheegay faaiidada uu leeyahay talaalkan.
Dhanka kale waxa uu ololihii talaalka cudurka jadeecada iyo daawaynta cudarada isku dhafka ah ka bilowday mm qabridahar. Waxaana daahfurka ololahan ka hadlay agaasinka ka hortaga cudurada faafa ee xafiiska caafimaadka DDSI Axmed Cabdulaahi Sugule oo sheegay inuu ololahan talaalkan yahay uu yahay mid muhiim u ah inay qaataan caruurta da'dooda udhaxayso 6 bilood ilaa 15 sano islamarkaana uu talaalkan ka hortag uyahay cururo kala duwan oo kamid tahay cudurka jadeecada. Sidoo kale waxaa iyana ka hadlay qaarkamid ah mas'uuliyiinta gobolka qoraxey iyo mas'uuliyiinta mm qabridahar oo sheegay faaiidada uu leeyahay talaalkan isalmarkaana waalidiinta ku booriyay inay caruurta keenaan goobaha talaalka
posted on Wednesday, June 7th, 17